Famaranana ny fanambadiana miaraka amin'ny aretina ara-toetran'ny fetra - Fanambadiana
midira miaraka amin'ny apple id hampavitrika imessage
ny fomba fanamboarana ny mpandahateny amin'ny iphone 6
anarana mafana hiantsoana ny sakaizanao
Famaranana ny fanambadiana miaraka amin'ny aretin-toetra mampiavaka ny fetra
Famaranana ny fanambadiana miaraka amina olana ara-toetran'ny sisintany.
Roa taona lasa izay, nanambady vehivavy izay noheveriko ho lafatra ho ahy aho. Tena nifankatia izahay, ary nahatsapa ho akaiky sy mifandray aminy aho ka fantatro avy hatrany fa te hanambady azy aho. Fotoana fohy taorian'ilay mariazinay anefa dia nandeha ny raharaha
Nanomboka niovaova ny fihetseham-pony, ary nanomboka nahery setra izy: nanary zavatra tamiko izy ary nanafika ahy tamin'ny zavatra kely indrindra. Mieritreritra aho fa manana aretina mitokana amin'ny sisin-tany izy; mifanaraka amin'ny soritr'aretina rehetra izy. Henoko izany BPD dia aretina maharitra. Tokony hisaraka aminy ve aho?
Tokony hisaraka amin'ny vadinao ve ianao?
Mampalahelo fa tsy misy valiny mora amin'ity iray ity . Fanapahan-kevitra lehibe manokana ny safidinao hisaraka na tsia ny vadinao, ary tsy misy afaka milaza aminao izay mety aminao. Na izany aza, ireto misy zavatra tokony hodinihina.
Voalohany, tsy mbola noteneninao raha efa voan'ny aretin'andriamanitra ny vadinao na tsia. Mety misy toe-javatra isan-karazany miteraka soritr'aretina nofaritanao, ary tsy maintsy manombatombana tsara izy hamaritana tsara izay mitranga.
Ny zavatra faharoa tsy tokony ho adino dia ny ampahany betsaka amin'ny olona manana aretina mitaiza amin'ny sisin-tany no mamaly ny fitsaboana. Noho izany, alohan'ny hieritreretana ny fisaraham-panambadiana, mety misy dikany ny mijery raha toa ny vadinao vonona sy afaka mandray anjara amin'ny fitsaboana amin'ny BPD izay mety hampihena ny soritr'aretiny.
Aza mihevitra foana ny ratsy indrindra
Na dia voamarina fa manana aretina mitaiza ny vadinao ary mazava fa sahirana ny fanambadianao, dia tsy tokony hieritreritra ianao fa ho sarotra be ilay raharaha.
Tsara ny manamarika fa na dia tsy misy fitsaboana aza, ny vinavina ho an'ny olona manana BPD dia mety tena ilaina. Betsaka ny olona voamarina fa manana aretina mitaiza no tsy mahafeno ny fepetra ho an'ity aretina ity mandritra ny taona vitsivitsy.
Ka raha manana ny aretina ny vadinao dia tsy voatery ho sazy mandrapahafatiny izany. Ny fitsaboana dia afaka manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamany, na afaka manatsara irery.
Ary farany, ny olona manana aretina mitaiza dia matetika manana soritr'aretina mahery vaika kokoa rehefa misy krizy ny fifandraisan'izy ireo. Ny fiasana hanorina fifandraisana milamina kokoa dia mety hanampy ny vadinao hiaina tsy fahatoniana ara-pihetseham-po kokoa.
Mazava ho azy, tokony hieritreritra ianao raha vonona hanao an'io. Ianao irery ihany no afaka mandray an'io fanapahan-kevitra io, saingy azonao atao ny mieritreritra ny hanao izany miaraka amin'ny fanampian'ny mpitsabo anao manokana, raha azo atao.
Fisaraham-panambadiana amin'ny BPD (fikorontanan'ny toetran'ny sisin-tany)
Ahoana no hanaporofoanao amin'ny mpitsara fa ilay olona eo alohanao, izay toa mahira-tsaina sy manan-karena, dia ho lasa mahery setra amin'ny lafiny tsy ampoizina rehefa miala amin'ny fitsarana izy?
Ny olona manana BPD dia olona manana ny mampiavaka azy indrindra ny tsy fandriam-pahalemana ara-pihetseham-po, ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny endrika samirery, amin'ny fifandraisan'ny samy olona ary miaraka amin'ny tsy fahazoana miavaka sy miavaka, ankoatry ny soritr'aretina maro hafa ary misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny tsirairay. (fahatsapana fahabangana maharitra, fiovan'ny toetr'andro matetika ary ao anatin'ny fotoana fohy, fahatezerana tsy mitongilana, fitondran-tena miketrika: alikaola, zava-mahadomelina, fisakafoanana mihinana, fiantsenana, fitondrana tsy am-piheverana, fijejojejoana sns.) , fandratrana tena, fanandramana tena, fifandraisan'ny samy olona samy hafa, sns.
Izy ireo dia olona izay mijaly mafy ao anaty ary mamaly fatratra (tsy mifankahazo: izy rehetra na tsy misy, mainty na fotsy, foana na tsy misy mihitsy.), Mampiasa fihetsika hanamaivanana ny tahotra anaty amin'ny alàlan'ny fomba manimba ny tenany sy ny hafa.
Mijaly izaitsizy izy ireo: mpivady, vady, iray tam-po ary ray aman-dreny, ary ireo dia mety iharan'ny aretina ara-tsaina lehibe (fanahiana, famoizam-po, sns.) .
Amin'ny tranga izay tsy iharan'ilay olona voakasik'izany ny fandaharanasa fitsabahan'ny psychotherapeutic sy psychopharmacological ataon'ny sampan-draharahan'ny fahasalamana ara-tsaina ary rehefa tandindomin-doza ny ain'ny hafa, ny fepetra horaisina dia ho fiarovana hatrany ny farany.
Tokony hisy ny fepetra tsy maintsy atao mba hiezaka ny hampanaiky ireo marary ireo amin'ny fitsaboana psychotherapeutic satria maro amin'izy ireo no mahalala ny filàna, saingy matahotra sao tsy hihatsara izy ireo.
TIP 1: Raha manapa-kevitra ny hisaraka ianao dia ataovy mafy sy haingana. Aza mampiseho fahalemena mihitsy satria hanao zavatra izany hamerenana anao na dia eo aza ny fikasana hamono tena. Azonao atao ve ny manalavitra ny fanodikodinana azy?
TIP 2: Raha tsara tarehy ianao dia mitandrema. Ny TLP dia mahafinaritra foana rehefa miomana hanafika izy ireo. Mitandrema raha tsara izy ireo satria ho hitanao fa malemy ny tenanao, ary hokapohiny ianao. Mifantoha amin'ny fisaraham-panambadianao ary aza mianjera amin'ny hafetsifetsen-dry zareo na fanakan-doha ara-pihetseham-po izay tsy isalasalana fa hampiasain'izy ireo.
TIP 3: Miomàna hiaro ny zanakao amin'ny fanasana ati-doha. Rehefa miverina aminao ny zanakao dia tsy maintsy mihaino ny zanakao ianao milaza aminao ny zavatra mahatsiravina rehetra lazain'ny TLP taloha momba anao. Tokony hanao zavatra araka ny natiora arak'izay azo atao ianao ary tsy hiteny amin'ny zanakao momba ny sakaizanao taloha, fa hazavao amin'izy ireo ny zava-mitranga raha sendra krizy ianao rehefa mitsidika ilay sakaizanao taloha ny zanakao.
TIP 4: Manakarama mpisolovava afaka mandoa vola ary hiaro anao mafy, satria ny TLP dia mpandainga pathological, manipulator, ary mety hampahatezitra anao ary avy eo dia hanao tatitra tsy marina anao, amin'ny alàlan'ny fitsarana hampiatoana anao. Matetika izy ireo dia manintona ary tratra avy hatrany. Voafitaka amin'ny laingany izy ireo. Miezaha mifampiresaka amin'ny mailaka foana fa tsy miantso telefaona, ary biraon'ny serasera mifandraika amin'ny ankizy ka mbola an-tsoratra izany raha toa ka mila mampiasa azy io amin'ny fiarovanao ianao indray andro any.
TIP 5: Mametraha fitsipika sy fitsipika. Ny fitsipika sy ny firafitra dia toy ny Kryptonite ho an'ny TLP. Mifikitra amin'ny lalàna ary aza manitsakitsaka azy ireo mihitsy, raha tsy izany dia manana fialantsiny tonga lafatra ianao hitaterana azy ireo. Asehoy ny zanakao fa tsy azo itokisana ny TLP amin'ny fihetsiny manokana. Ho vatolampy ho an'ny zanakao, ary tsarovy fa adidiny ny hanana ny TLP amin'ny fiainany mandrakizay.
Bornovalova, M., Gratz, K. L., Delany-Brumsey, A., Paulson, A., & Lejeuz, C. W. (2006, Jona). Ireo antony mampidi-doza amin'ny tontolo iainana sy ny tontolo iainana noho ny fikorontanan'ny toetr'andro eo amin'ireo mpampiasa zava-mahadomelina ao an-tanàna amin'ny fitsaboana trano. Gazety momba ny aretina ara-toetra , roa-polo amby (3), 218-231
Coolidge, F. L., Thede, L. L., & Jang, K. L. (2001, Febroary). Heritability ny fikorontanan'ny toetranao amin'ny fahazazany: fanadihadiana savaranonando. Gazety momba ny aretina ara-toetra , dimy ambin'ny folo (1), 33-40
Aretin'ny toetran'ny olona amin'ny sisin-tany. (2017).
Aretin'ny toetran'ny olona: maninona no sarotra ny fifandraisana ary ahoana no fomba ahazoana fanampiana. (2018).
Fossati A, et al. Ny fanatsarana ny fiasan'ny fianakaviana (antenaina) hanatsarana ny fahombiazan'ny fitsaboana amin'ny aretin'ny toetran'ny sisin-tany: fotoana iray tsy hanilihana. (2018). DOI:
Inona no azo atao ao amin'ny fandriana kristiana?